Valan'aretina COVID-19 Hawaii: Firaketana avo lenta iray hafa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao farany momba ny Hawaii » Valan'aretina COVID-19 Hawaii: Firaketana avo lenta iray hafa
Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Hita • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Firongatry ny tsimokaretina COVID-19 any Hawaii
Miroborobo ny fizahan-tany any Hawaii, ary toy izany koa ny COVID-19 amin'ireo tsy vaksiny mbola tsy nisy toy izany. Miaraka amin'ny aretin'ny virus coronavirus 243 vaovao, ny Aloha Misedra olana lehibe ny fanjakana.
Tranga vaovao COVID-19 any Hawaii no miakatra ary nihanika isan'andro isan'andro nandritra ny herinandro mahery.
Ny fizarana ny isan'ny isan-jaton'ny olona vita vaksiny ao amin'ny fanjakana, Hawaii dia manatri-maso aretina vaovao izay mihoatra ny avo roa heny noho ny andro avo indrindra voatanisa taorian'ny areti-mandringana.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny tranga vaovao toa izao, mety hisy hieritreritra fa tonga ny fotoana hamerenana amin'ny laoniny ny mandat de voyage, saingy hatreto dia mbola tsy nanova zavatra ny governemanta.
Ny fanesorana ireo izay vita vaksinim-panjakana ankehitriny (60 isan-jato), dia aretina 243 no esorina amin'ny fihoarana aretina 700 raha ny isa tamin'ny taon-dasa talohan'ny nitrangan'ny vaksiny.
Ny andro ratsy indrindra hatramin'ny nipoahan'ny areti-mandringana dia ny 27 Aogositra 2020, miaraka amin'ny tranga vaovao 371 isan'andro. Saingy mifototra amin'ny famaritana ireo vaksiny, androany no fiakarana avo indrindra amin'ny aretina vaovao, ary mangina ireo mpitarika fizahantany.
Feno hotely, trano fisakafoanana ary fivarotana. Tsy dia misy toerana malalaka ho an'ny torapasika malaza, toa ny Beach Waikiki, hahitana toerana ho an'ny lamba famaohana.
Tsy misy ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena, fa ny fahatongavan'ireo tonga an-trano dia mitambatra ny fahatongavan'ireo vao tonga noho ny talohan'ny areti-mandringana.
Ny tahan'ny aretina coronavirus any Hawaii dia nahatratra isa telo isa tato anatin'ny 8 andro ary miakatra isan'andro.
Tranga vaovao 146 no voasoratra anarana tao amin'ny County County Honolulu, 50 tany Hawaii County, 14 tany Maui County, ary 8 tany County County Kauai.
Manodidina ny 78 isan-jaton'ny tranga tamin'ny volana Jolay no avy amin'ny fielezan'ny fiarahamonina, 20 isan-jaton'ny mponina niverina avy nanao dia, ary 2 isanjaton'ny dia tsy an'ny mponina.
Ny fahatongavan'ireo mpizahatany firaketana dia mety manana antony 2 isan-jato fotsiny, izay vaovao tsara ho an'ny toekarena, saingy miaraka amin'ny fitomboan'ny isany, mety tonga ny fotoana hampihemorana ny famerana.
Ny fotoana farany Hawaii dia teo ambanin'ny hidin-trano tanteraka miaraka amin'ny isan'ny tranga vaovao hita. Androany, tsy misy na dia teny iray aza ambaran'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta.
Hatramin'ny 8 Jolay 2021, ireo mpitsidika vita vaksiny tanteraka dia tsy mila miahiahy intsony momba ny fanomezana fitsapana PCR ratsy mba hisorohana ny quarantine 10 andro, ary miaraka amin'ny fahatongavana maherin'ny 30,000 isan'andro, dia aseho io fiovana famerana ny fivezivezena io.
Betsaka kokoa ny mpitsidika any Hawaii ankehitriny raha oharina amin'ny taona 2019. Raha mandehandeha ianao na mandeha amin'ny lalana Kalakaua Avenue any Waikiki dia manodidina ny 5 isan-jaton'ny olona no manao sarontava. Na izany aza, miaraka amina tranga vaovao marobe, tsy misy fitsikilovana iray avy amin'ny Governora handidy ny hisaron-tava indray.
Hawaii dia manaraka fironana any Etazonia fa leo ny olona ary tsy afa-mihetsika ara-tsaina. Tsy miraharaha intsony ny hisaron-tava izy ireo, izay ho fisorohana tokana indrindra amin'ny COVID-19 ankoatry ny fanaovana vaksiny feno. Izany dia fomba fisainana manimba ary fampandrosoana mampidi-doza.